ESI WEPU FACEBOOK NA INSTAGRAM - FACEBOOK - 2019
Unlink Instagram si Facebook
Mgbe ị na - eji akwụkwọ Excel, ọ na - adịkarị mkpa ọ bụghị naanị iji tinye mkpụrụ ndụ, kamakwa iji kpochapụ ha. Usoro nhichapụ bụ n'ozuzu ya, ma enwere ọtụtụ nhọrọ maka ịrụ ọrụ a, nke ọ bụghị ndị ọrụ niile nuru. Ka anyị mụtakwuo banyere ụzọ niile ị ga-esi wepu mkpụrụ ndụ ụfọdụ na teepu Excel.
Hụkwa: Otu esi ehichapụ akara na Excel
Usoro Mwepụ Cell
N'ezie, usoro maka ihichapụ mkpụrụ ndụ na Excel dị iche na ọrụ nke ịgbakwunye ha. Enwere ike ikewa ya na nnukwu ìgwè abụọ: nwepụ nke mkpụrụ ndụ jupụtara na mkpụrụ ndụ. Ụdị nke ikpeazụ, ma e wezụga, nwere ike ịmepụta ya.
Ọ dị mkpa ịmara na mgbe ị na-ehichapụ mkpụrụ ndụ ma ọ bụ òtù ha, ma ọ bụghị akara siri ike na ogidi, data gbanwere na tebụl. Ya mere, mmejuputa usoro a kwesiri ime nke oma.
Usoro 1: onodu ozo
Nke mbụ, ka anyị tụlee mmebi nke usoro a site na menu ndokwa. Nke a bụ otu n'ime ụdị kachasị ewu ewu nke ime ihe a. Enwere ike itinye ya n'ọrụ ma ihe jupụtara na ihe efu.
Họrọ otu ihe ma ọ bụ otu nke anyị chọrọ ka ihichapụ. Mee igodo na nhọrọ ya na bọtịnụ òké aka. A na-emepụta ihe ndị na-ekwu gburugburu. Na ya anyị na-ahọrọ ọnọdụ ahụ "Hichapụ ...".
Na-agba obere windo mwepụ. N'ime ya, ị ga-ahọrọ ihe anyị chọrọ ka ihichapụ. Enwere nhọrọ ndị a:
Sel, nkwụsị aka ekpe;
Ebe ọ bụ naanị na anyị chọrọ ihichapụ mkpụrụ ndụ ahụ, ọ bụghị dum ahịrị ma ọ bụ ogidi, anyị anaghị aṅa ntị na nhọrọ abụọ ikpeazụ. Họrọ ihe na-adọrọ gị n 'nhọrọ abụọ mbụ ahụ, ma mee ka mgbanwe ahụ gaa n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Dị ka ị nwere ike ịhụ, mgbe ihe a gasịrị, a ga-ehichapụ ihe niile ahọpụtara; ọ bụrụ na a họrọ ihe mbụ dị na ndepụta ahụ edepụtara n'elu, mgbe ahụ jiri ngbanwe gaa n'elu.
Ma, ọ bụrụ na ahọrọ ihe nke abụọ, wee jiri ngbanwe gaa n'aka ekpe.
Usoro 2: teepu ngwaọrụ
A pụkwara ịmepụ sel na Excel site na iji ngwaọrụ ndị e gosipụtara na teepu ahụ.
Họrọ ihe a ga-ehichapụ. Bugharịa na taabụ "Home" ma pịa bọtịnụ ahụ "Hichapụ"nke dị na teepu na ngọngọ nke ngwaọrụ "Sel".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ewepụ ihe ahọrọ ahụ na ngbanwe nke elu. Ya mere, usoro a nke usoro a anaghị ekwe ka onye ọrụ họrọ ntụziaka nke ngbanwe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ otu mkpụrụ ndụ selụ n'ụzọ dị otú a, mgbe ahụ, iwu ndị a ga-etinye.
Họrọ otu ihe a nke usoro nhazi. Pịa bọtịnụ "Hichapụ"tinye na tab "Home".
Dị ka ọ dị na mbipute gara aga, a na-ehichapụ ihe ndị ahụ ahọpụtara na ntụgharị elu.
Ọ bụrụ na anyị gbalịa iwepu ihe ndị dị na ya, mgbe ahụ, ngbanwe ahụ ga-eme na ntụziaka ọzọ.
Họrọ otu ihe nke ihe nhazi ihu. Pịa bọtịnụ. "Hichapụ" na teepu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na njedebe nke usoro a, a na-ehichapụ ihe ndị ahọrọ ahụ na ntụgharị gaa n'aka ekpe.
Ma ugbu a, anyị ga-anwa ime ka mwepụ site na usoro a nke ọtụtụ usoro nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke nhazi na ntanetị.
Họrọ ụdị a ma pịa bọtịnụ ahụ. "Hichapụ" na teepu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, na nke a, a na-ehichapụ ihe niile ahọrọ ahọrọ na aka ekpe.
A kwenyere na iji ngwaọrụ ndị dị na rịbọn ahụ adịghị arụ ọrụ karịa nhichapụ site na menu ndị dị gburugburu, ebe ọ bụ na nhọrọ a enyeghị onye ọrụ nhọrọ nke nhazi ahụ. Ma ọ bụghị. Iji ngwaọrụ ndị dị na rịbọn ahụ, ị ​​nwekwara ike ihichapụ sel site na ịhọrọ ntụziaka nke ịgbanwee onwe gị. Ka anyị lee otú ọ ga-esi lee ihe atụ nke otu ụdị dị na tebụl.
Họrọ ụdị n'usoro multidimensional, nke a ga-ewepụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ n'onwe ya. "Hichapụ", na triangle, nke dị kpọmkwem n'aka nri ya. Mee ka ndepụta nke omume dị. Ọ ga-ahọrọ nhọrọ "Hichapụ sel ...".
Nke a na-esote site na ịmepụta windo ahụ ehichapụ, nke anyị maara na mbụ na mbido mbụ. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa ka anyị wepụ otu usoro ihe omume dị iche iche na ngbanwe nke dị iche na nke na-eme ma ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ "Hichapụ" na teepu ahụ, ị ​​ga-ebugharị ngbanwe ahụ gaa n'ọkwá "Sel, na-agafe elu". Wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Dịka ị nwere ike ịhụ, mgbe nke a gasịrị, a kwụsịrị ndepụta ahụ dị ka ntọala ndị akọwapụtara na windo ahụ ehichapụ, ya bụ, na ngbanwe dị elu.
Usoro 3: jiri hotkeys
Mana ụzọ kachasị ngwa iji rụọ usoro n'okpuru ọmụmụ nwere ike iji usoro nke ikpo ọkụ ọkụ.
Họrọ ebe anyị chọrọ iwepu na mpempe akwụkwọ ahụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa igodo nchịkọta "Ctrl" + "-" - " na keyboard.
Ejila windo ama ama maka nhichapụ ihe dị iche iche. Họrọ ntụgharị usoro chọrọ ma pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Dịka ị nwere ike ịhụ, mgbe nke a gasịrị, a ga-ehichapụ ihe ndị ahọrọ ahụ na ntụziaka nke ngbanwe, nke e gosipụtara na paragraf mbụ.
Ihe omumu: Uzo okpo na Excel
Nzọụkwụ 4: Wepụ ihe ndị gbanwere agbachapụ
Enwere ikpe mgbe ịchọrọ ihichapụ ọtụtụ ntanetị ndị na-adịghị n'akụkụ, ya bụ, dị n'akụkụ dị iche iche nke tebụl. N'ezie, ọ bụla n'ime ụzọ ndị a kọwara n'elu nwere ike iwepu ha, na-eme usoro ahụ iche iche na nke ọ bụla. Mana o nwere ike iwe oge. Ọ ga-ekwe omume iwepụ ihe na-adịghị mma site na mpempe akwụkwọ ahụ ngwa ngwa. Mana nke a, ha kwesịrị, karịa ihe niile, ka a pụta ìhè.
Anyị na-ahọrọ ihe mbụ na ụzọ mbụ, na-ejide bọtịnụ òké aka ekpe ma na-agbagharị na ya na cursor. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ejide bọtịnụ ahụ Ctrl ma pịa mkpụrụ ndụ ndị ọzọ gbasasịrị ma ọ bụ mechie oghere ndị ahụ na-ejikọ na bọtịnụ aka ekpe.
Mgbe emechara nhọrọ ahụ, ị ​​nwere ike ihichapụ ya site na iji usoro atọ ọ bụla anyị kọwara n'elu. A ga-ehichapụ ihe niile ahọpụtara.
Nzọụkwụ 5: Wepu mkpụrụ ndụ ndị dara mbà
Ọ bụrụ na ịchọrọ ihichapụ ihe efu na tebụl, mgbe ahụ, usoro a nwere ike ịmepụta ya ma gharawawa nke ọ bụla n'otu n'otu. Enwere ọtụtụ nhọrọ maka idozi nsogbu a, ma ụzọ kachasị mfe ime nke a bụ na ọrụ nhọrọ nhọrọ nke ụlọ.
Họrọ tebụl ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na mpempe akwụkwọ ebe ịchọrọ ihichapụ. Wee pịa igodo ọrụ na keyboard. F5.
Mgbanwe windo amalite. O kwesịrị pịa bọtịnụ ahụ "Mee ka ..."tinye ya na akuku aka ekpe ya.
Mgbe nke ahụ gasịrị, mpio nke nhọrọ ntanetị mepee. Ọ ga-edozi mgbanwe ahụ n'ọkwá "Ụdị mkpụrụ ndụ"wee pịa bọtịnụ ahụ "OK" na ala aka nri nke window a.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe ọrụ ikpeazụ gasịrị, a họọrọ ihe niile na-adịghị ọcha na akọwapụtara.
Ugbu a, naanị anyị nwere ike wepu ihe ndị a site na nhọrọ ọ bụla a depụtara na ụzọ atọ mbụ nke ihe mmụta a.
Enwere nhọrọ ndị ọzọ maka iwepu ihe efu, nke a na-atụle n'ụzọ zuru ezu na isiokwu dị iche.
Ihe nkuzi: Otu esi ehichapu sel efu na Excel
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-esi ehichapụ sel na Excel. Usoro nke ihe ka ọtụtụ n'ime ha bụ otu, yabụ mgbe ị na-ahọrọ ụdị omume, onye ọrụ ahụ na-eduzi ya. Ma, ọ ka dị mkpa ịmara na ụzọ kachasị ngwa iji rụọ usoro a bụ iji ngụkọta igodo ọkụ. Ihe na-ewepu bụ mwepụ nke ihe efu. Ị nwere ike imechi ọrụ a site na iji ngwa nhọrọ mkpụrụ ndụ, ma mgbe ahụ, ị ​​ka ga-eji otu nhọrọ nhọrọ maka nhichapụ kpọmkwem.